Muxuu tababaraha xulka England ka yiri bar-barihii ay xalay la galeen Ruushka? – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Bournemouth Iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Real Madrid oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Espanyol & Benzema oo markale shabaqa gaaray…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Everton Iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Iyo Espanyol ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Xulkeenna Soomaaliya oo kulankiisa furintaanka tartanka Cecafa Senior Challenge maanta wajahaya Jabuuti
Horudhac: Barcelona vs Mallorca… (Blaugrana oo bartilmaameedsanaysa guusheedii lixaad oo xiriir ah marka ay caawa soo dhoweynayaan Mallorca)
Horudhac: Manchester City vs Manchester United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Manchester Derby)
Horudhac: Bournemouth vs Liverpool… (Reds oo indhaha ku haysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka Premier League)
Horudhac: Everton vs Chelsea… (The Blues oo xaqiijisay booskeeda afaraad ayaa galabta garoonka Goodison Park ku booqanaysa Everton)
Horudhac: Real Madrid vs Espanyol… (Los Blancos oo indhaha ku haysa inay gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah horyaalka La Liga)
Muxuu tababaraha xulka England ka yiri bar-barihii ay xalay la galeen Ruushka?
(France) 12 Juunyo 2016. Xulka England ayaa weli guul gaari la’ kalankooda furitaanka tartanka Euro inkastoo ay xalay aad ugu dhawaadeen inay soo afjaraan rikoodhkaasi xun.
Eric Dier ayaa laadka xorta oo cajiib ahaa hogaanka ugu dhiibay xulka saddexda libaax oo ciyaarta maamulanayay daqiiqadii 73-aad balse nasiib darro daafaca xulka Ruushka Vasili Berezutski ayaa guusha u diiday kaddib markii uu gool madax ah ka dhaliyay dhammaadkii ciyaarta.
Tababaraha xulka England Roy Hodgson ayaa u dareensan bar-baraha uu la galay xulka Ruushka sida guul darro oo kale wuxuuna ammaan huwiyay da’yarta xulka Engaland.
“Inaan iraahdo si aad u qaraar ayaan u niyad jabsanahay waxay noqoneysaa inaan yareysanay,” Hodgson ayaa sidaa u sheegay BBC Radio 5 Live.
“Waxaan dareemaynaa sida guul darro oo kale maxaa yeelay waxaan isku diyaarinayanay dabaal deg.
“Way adag tahay inaan aqbalno, laakiin waqti dheer naguma qaadan doonto inaan ka soo kabano. Waxaa jiri doona waxyaabo badan oo laga qaadan doono kulankan marka la falanqeeyo, waxaan u maleynayaa inaan fiicnayn kulanka intiisa badan.”.
Tababare Hodgson ayaa sidoo kale ammaan ugu qubeeyay xiddiga dhaliyay laadka xorta ah ee Eric Dier.
“Waan ogaa inuu midaa sameyn karo maxaa yeelay waxaynu ku aragnay tababarka.
“Waxay ahayd jahwareer inaa dhalin kari wayno gool kale si aan u soo afjarno ciyaarta. Fursadaha ayaan helnay balse kama faa’iideysan.”.
COPA AMERICA: USA iyo Colombia oo u soo gudbay wareega sideed dhammaadka
Alan Shearer iyo khubaro kale oo Isboorti oo ay ka dagi la’dahay in Harry Kane xalay loo xil saaray tuurista KOORNOOYINKA kulankii England!